“ပါပီလို” ေၾကာ္ျငာ ႐ိုက္ကြင္း မွ မမ သင္ဇာ ရဲ႕ ႐ိုက္ကြင္း ေပၚက ဗီဒီယို လန္ထြက္ ေနတာပဲ ၾကည့္ေပေတာ့ …. – Let Pan Daily
အရည္အေသြးေကာင္းၿပီး အၾကမ္း ခံသလို ေဈးႏႈန္း လည္း တန္တဲ့ Papilo Myanmar ဖိနပ္ ေၾကာ္ျငာ ကို သ႐ုပ္ေဆာင္ သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္၊ စည္သူပလပ္ကြၽတ္ တို႔က ေမာ္ဒယ္မ်ား ၊ Body Builder မ်ား နဲ႔အတူ ရန္ကုန္၊ Parami Hotel မွာ ႐ိုက္ကူးခဲ့ပါတယ္။ တစ္မ်ိဳးၿပီးတစ္မ်ိဳးမ႐ိုးေရာအင္ပါပဲ
ခုလည္း ပါပီလို ေၾကာ္ျငာ႐ိုက္ကြင္းမွာ အလြန္လန္းေနတဲ့ သင္ဇာရဲ႕စတိုင္ေတြ ကို အားရဖြယ္ေတြ႕ရမွာပါ ပရိတ္သတ္ႀကိးေရ ခ်စ္တဲ့သူေတြကအား ေပးၾကသလို မုန္းတဲ့သူေတြကလည္း ဆဲၾကေပါ့ ဒီလိုပါ လူဆိုတာ အေကာင္းျမင္တဲ့သူနဲ႔အဆိုးျမင္သူဆိုတာ အၿမဲဒြန္တြဲေနတာပဲေလ အားေပး ခ်င္လည္း အားေပးပါ ဆဲခ်င္လည္းဆဲၾကပါေပါ့ လူတိုင္းလြတ္လပ္စြာ သေဘာထားကြဲလြဲၾကခြင့္ရွိတာဆိုေတာ့ မထူးဆန္းေတာ့ ပါဘူးေနာ္
ေယာက္်ားထုႀကီးကေတာ့ ဘယ္လိုျဖစ္ျဖစ္ သင္ဇာဘက္မွာရွိေနမွာ ေသခ်ာသေလာက္ပါပဲေနာ္။ ၾကည့္ရႈခံစား ေဝဖန္သြာ းလိုက္ပါအုန္း။ ကိုႀကီးေက်ာ္
“ပါပီလို” ကြော်ငြာ ရိုက်ကွင်း မှ မမ သင်ဇာ ရဲ့ ရိုက်ကွင်း ပေါ်က ဗီဒီယို လန်ထွက် နေတာပဲ ကြည့်ပေတော့ ….
အရည်အသွေးကောင်းပြီး အကြမ်း ခံသလို ဈေးနှုန်း လည်း တန်တဲ့ Papilo Myanmar ဖိနပ် ကြော်ငြာ ကို သရုပ်ဆောင် သင်ဇာဝင့်ကျော်၊ စည်သူပလပ်ကျွတ် တို့က မော်ဒယ်များ ၊ Body Builder များ နဲ့အတူ ရန်ကုန်၊ Parami Hotel မှာ ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးမရိုးရောအင်ပါပဲ
ခုလည်း ပါပီလို ကြော်ငြာရိုက်ကွင်းမှာ အလွန်လန်းနေတဲ့ သင်ဇာရဲ့စတိုင်တွေ ကို အားရဖွယ်တွေ့ရမှာပါ ပရိတ်သတ်ကြိးရေ ချစ်တဲ့သူတွေကအား ပေးကြသလို မုန်းတဲ့သူတွေကလည်း ဆဲကြပေါ့ ဒီလိုပါ လူဆိုတာ အကောင်းမြင်တဲ့သူနဲ့အဆိုးမြင်သူဆိုတာ အမြဲဒွန်တွဲနေတာပဲလေ အားပေး ချင်လည်း အားပေးပါ ဆဲချင်လည်းဆဲကြပါပေါ့ လူတိုင်းလွတ်လပ်စွာ သဘောထားကွဲလွဲကြခွင့်ရှိတာဆိုတော့ မထူးဆန်းတော့ ပါဘူးနော်
ယောက်ျားထုကြီးကတော့ ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် သင်ဇာဘက်မှာရှိနေမှာ သေချာသလောက်ပါပဲနော်။ ကြည့်ရှုခံစား ဝေဖန်သွာ းလိုက်ပါအုန်း။ ကိုကြီးကျော်
အာဏာရှင် ကို ဆန့်ကျင်ကြောင်း သီချင်း တပုဒ် နဲ့ ဖော်ထုတ် လိုက်တဲ့ ရဲရင့်အောင်
တစ်ဦးတည်းသောချစ်သူလေး ရဲ့ မွေးနေ့အတွက် တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်းတဲ့ လက်ဆောင်လေး တစ်ခုပေးလိုက်တဲ့ မအေးသောင်း